Waraysi gudoomiya Balad Xaawo - BBC Somali
Waraysi gudoomiya Balad Xaawo
Kenya waxay sheegtay ciidamadeedu in ay weerareen oo Alshabaab ay kaga dileen axadii gudaha Soomalia ilaa 100 Alshabaab. Waxay ka dambeysay Sabtidii markii Alshabaab ay dileen gudaha Kenya magaalada Mandera 28 qof oo saarnaa bas.
Laakiinse Alshabaab Waxay sheegeen inaan dad laga dilin. Gudaha Soomaalia masuuliyiin joogta waxay BBC u sheegeen in ay ciidamada Kenya duqeyn iyo weeraro ka geysteen meelo ay degan yihiin shacab. Yusuf Maxamed Abdikadir oo ah guddoomiyaha degmada Balad Xaawo ayaa ka waramay.
Laakiin dowladda Kenya ayaa beenisay inay weerareen rayad.